MACLUUMAADKA TARANKA YAR EE POODLE DOG - EEYAHA
Luca oo ah khudaar lab oo midabkiisu yahay Mini Poodle oo jira 5 sano
pitbull terrier labrador qas iskudhafka
Yaryar Poodle oo ku qoran luqado kale
Faransiis: Carniche Moyen
Talyaani: Guntin Guntin
Markii loo hagaajiyay si loo muujiyo heerarka eeyga jirka Guntiga Yar Yar waxaa loogu talagalay inuu bixiyo muuqaal laba jibbaaran. Qiyaastii waa dherer la mid ah dhererka meesha engegay. Qalfoofka waxaa si dhexdhexaad ah loogu soo koobay joogso yar laakiin sugan. Waxay leedahay gun dheer, oo toosan. Indhaha mugdiga ah, ee u eg oval-ka ayaa xoogaa kala fog oo waa madow ama bunni. Dheguhu waxay u sudhan yihiin meel u dhow madaxa wayna dheer yihiin oo fidsan yihiin. Labada lugood ee hore iyo gadaalba waxay u dhigmayaan cabirka eeyga. Khadka sare waa heer. Dabada ayaa la dhigay oo kor loo qaaday. Mararka qaarkood waxaa lagu xiraa kala bar dhererkiisa ama ka yar si eygu u ekaado mid dheellitiran. Fiiro gaar ah: Diraacyada dabogu waa sharci darro inta badan waddamada Yurub. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Cagaha u eg-oval-ka way yaryihiin oo suulasha ayaa qalooca. Koodhku waa mid duuban ama xadhig leh. Waxay ku jirtaa dhammaan midabada adag oo ay ku jiraan madow, buluug, qalin, cawl, kareem, abrikot, casaan, caddaan, bunni ama kafateerik lait. In kasta oo aysan sameynin heerka bandhigga qoran, kuwa wax soo saara qaarkood ayaa tarma Poodles midabbo kala duwan leh. U fiirso qurxinta noocyada kala duwan ee Poodle clips.
Guntinta Guntiga yar waa eeyga wehelka ah ee caqliga badan, ee faraxsan. Waa loo tababbaran karaa heer sare waana mid diyaar u ah kuna faraxsan inay ka farxiso shaqaalihiisa. Muuqaal iyo xariifnimo, waxaa badanaa loo isticmaalaa sida eeyga circus. Hadba inta eey caqli badan tahay, ayey u sii baahan tahay maskaxdiisu inay mashquuliso. Noocani kuma noolaan karo banaanka qol. Waxay ubaahantahay inay kamid ahaato qoyska. Waxay noqon kartaa heer sare ah haddii aan la siinin nooca iyo xaddiga jimicsiga . Ha u oggolaan eeygan inuu horumariyo Cudurka Dog yar , Halka eyga loo horseedo inuu rumaysan yahay inuu alfa ku yahay aadanaha. Waxay ku keeni kartaa eyga inuu noqdo xasaasi ah oo cabsi leh , oo aan aad loogu aamini karin carruurta iyo suurtagalnimada shisheeyaha, oo ay weheliyaan arrimo kale oo badan oo dabeecad ah. Bulsho eygaaga sifiican. Tani waa ilaalin aad u wanaagsan oo ku saabsan cabbirkeeda, marar dhif ah ayey noqoneysaa mid dagaal badan. Eeyadu waxay bilaabi karaan inay ciyo badan iyagoo aan sax ahayn bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine , xeerar la raaco iyo xaddidaadda waxa loo oggol yahay inay sameeyaan. Poodles waa saaxiibtinimo eeyaha kale iyo xayawaanka aan xayawaanka ahayn . Hubso inaad tahay shirkada eygan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado wixii aan la rabin dhibaatooyinka dhaqanka .
Dhererka: 11 - 15 inji (28 - 38 cm)
Miisaanka: 15 - 17 rodol (7 - 8 kg)
Tirada noocyada rasmiga ah ee loo yaqaan 'AKC' ee loo yaqaan Poodle waxaa lagu go'aamiyaa dherer, ma'aha miisaanka. Poodle-ga Yar waa inuu ka badnaadaa 10 inji iyo 15 inji ama ka yar meesha ugu sarreysa garabka. Poodle kasta oo ka weyn 15 inji ama ka yar 10 inji meesha ugu sarreysa garabka kuma tartami karo giraanta muujinta AKC ee ah Guntin Guntin.
U nuglaanta araga indhaha, xannuunka 'retinal atrophy' (PRA) oo sababi kara indho la'aan, IMHA (Cudurka Wadnaha ee Hemolytic Anemia), cudur wadne, kaadi macaan, suuxdin, indhaha oo duuf qaba, caabuqa dhagaha iyo xasaasiyadda maqaarka. Poodles Brown waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwo cirro ah oo aan qaan gaadhin.
Poodle-ka yar ayaa ku wanaagsan nolosha guriga. Waxay noqon doontaa mid deggan gudaha haddii ay hesho jimicsi ku filan. Way fiicnaan doontaa la'aan deyr.
Poodles Ghadafi ayaa u baahan a socod maalinle ah . Intaad socodka ku jirto hubso in eey ciribta ka xigto ama ka dambeyso qofka hogaanka haya, marna hore, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Sida noocyada oo dhan, ciyaaruhu ma buuxin doonaan dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida barxad weyn oo ood leh. Waxay jecel yihiin biyaha iyo kal-fadhiyada jacaylka ee ciyaarta. Waxay yihiin nooc aad u fara badan oo leh ugaarsi iyo dib u soo helid bilow, inkasta oo ay ku fiicnaadaan dhacdo kasta oo waxqabad ah oo aad siiso, oo ay ku jiraan firfircoonida, adeecida, isu soo baxa iyo muujinta isbarbar dhiga, inta badanna mid ayaa ka tagaya hal giraan oo si toos ah ugu taga mid kale si uu mar kale u tartamo. Maaddaama ay jecel yihiin biyaha waa eyda quusitaanka weyn waxayna jecel yihiin soo-celinta biyaha.
Qurxin ballaaran ayaa loo baahan yahay haddii eeyga la soo bandhigo. Poodles waa in si joogto ah loo maydhaa oo la xajiyaa lix ilaa sideed toddobaad kasta. Nadiifi oo ka hubi dhegaha si joogto ah wax ama caarada ama caabuqa oo soo bixi timaha ka soo baxa gudaha kanaalka dhegta. Ilkaha waxay u baahan yihiin miisaan balaaran. Maadaama uusan jaakadu daadin waxay u baahan tahay in la jarjaro. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo loo yaqaan 'Poodle clips'. Kuwa ugu badan ee milkiileyaasha xayawaanku leeyihiin waa clip-daryeel fudud oo loo yaqaan 'xayawaanka xayawaanka,' 'puppy clip' ama 'clip clip', halkaas oo jaakaddu ka gaabin jirka oo dhan. Muuqaaladda bandhiga caanka ah waa sadarka Ingiriisiga iyo qaybta Qaaradaha halka qaybta dambe ee jidhka la xiirto, jijimooyin looga tago hareeraha anqawyada, iyo pom-poms ayaa looga tagaa dabo iyo miskaha. Heerka AKC wuxuu u oggol yahay eey ka yar hal sano in lagu muujiyo muusig yar oo yar yar oo loo yaqaan 'puppy clip' kaasoo leh shuruudo gaar ah sida foorarsiga dhamaadka dabada. Noocyada kale ee koodhka ah ayaa ah koodhka qaaradda ee la beddelay, magaalada iyo waddankiisa, xayndaabka ama kaydka adeegga, kaydka xagaaga, iyo Miami ee bikini clip. Poodles wax yar ayey daadiyaan timo la'aan waxayna kufiicanyihiin kuwa xasaasiyadda qaba .
Poodle-ka waxaa caan ku ahaa Galbeedka Yurub oo dhan ugu yaraan 400 oo sano waxaana lagu xardhay sawirro qarnigii 15-naad iyo bas-qabow laga soo bilaabo qarnigii 1aad. Mawduuca waa mid lagu muransan yahay halka eey si rasmi ah loogu horumariyey oo cidina run ahaantii ma oga dhalashada asalka ah ee asalka ah. Faransiisku waxay sheegteen asal ahaan, laakiin AKC ayaa sharaf siinaya Jarmalka, halkaas oo ay sheegeen in loo adeegsaday eey biyo ka soo saara. Sheegashooyinka kale waxay ahaayeen Danmark, ama Piedmont-kii hore. Waxa hubaal ah in eeygu ka farcamay imminka bakhtiyey Eyga Biyaha ee Faransiiska, Barbet iyo suurtagal ahaan Hungary Water Hound. Magaca 'Poodle' waxay u badan tahay inuu ka soo baxay ereyga Jarmalka 'Pudel,' oo macnaheedu yahay 'mid ku ciyaara biyaha.' Muuqaalka 'Poodle clip' ayaa waxaa loogu talagalay ugaarsadayaasha si ay eeyaha uga caawiyaan inay si hufan u dabaashaan. Waxay hawada uga tagi lahaayeen dhinacyada kalagoysyada lugaha si looga ilaaliyo qabow daran iyo cawsduur fiiqan. Ugaarsadayaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa u isticmaalay Poodle sida gundog iyo dib u habeyn haad biyoodka iyo urinta shixnadaha waaweyn ee jiifa dhulka hoostiisa. Faransiisku wuxuu bilaabay inuu u adeegsado jilitaanka inuu noqdo jilaa circus sababtoo ah eeyga sirdoonka sare iyo tababbarka. Noocani wuxuu caan ku noqday Faransiiska, taas oo keentay magaca caanka ah ee 'French Poodle,' laakiin dadka Faransiiska dhab ahaan waxay ugu yeeraan 'Caniche,' oo macnaheedu yahay 'eyga duck.' The Ciyaaraha iyo Poodle Guntin noocyo ayaa laga soo saaray eyda waaweyn, maanta loo yaqaan Poodles-ka caadiga ah . Qarnigii 18-aad, Poodles-yada yaryar waxay caan ku noqdeen dadka boqortooyada. Saddexda cabbir ee rasmiga ah waa Toy, Miniature iyo Standard Poodle. Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal nooc oo waxaa lagu xukumaa isla halbeeg qoran laakiin leh cabirro kaladuwan oo kala duwan. Bixiyeyaashu sidoo kale waxay tarmayaan cabbirka udhaxeeya ee loo yaqaan a Klein Poodle (Dhexdhexaad Poodle) iyo mid ka yar Shaaha Poodle . Qaar ka mid ah hibooyinka Poodle-ka waxaa ka mid ah: dib u soo ceshan, firfircoonaan, ilaalin, adeecid tartan iyo qabashada tabaha.
PCA = Naadiga Poodle ee Mareykanka
PCC = Naadiga Poodle ee Kanada
Leia Poodle-ka Yar ee 2 sano jir ah— 'Leia waa macaan tahay, adeecsan tahay, aadna u saaxiibtinimo badan. Waxay noqon kartaa eey aad qaadato a socod dheer ama wadarta baradhada fadhiga Waxay niyadeyda si fudud buu u aqriyaa wuuna garanayaa inuu dego markaan rabo. Waxay jeceshahay inay dadka la joogto, laakiin iyadu kuma dheggan. Wax kasta oo ay inala qabato annaga, illaa iyo inta ay wax la qabaneyso aniga iyo qoyskeyga, waa waxa ay ugu jeceshahay in la sameeyo. Waan daawadaa Cesar Millan, waxaanan ku raacsanahay in badan oo falsafaddiisa ah oo aan ku dabaqo eeygayga, waana hubaa inay ka caawisay sidii ay ugu yeelan lahayd wehelkeeda cajiibka ah ee ay maanta tahay. In kasta oo ay tahay inaan ogaado inaanay lahayn arrimo badan oo habdhaqan ah markii hore, sida ay tahay si dabiici ah u deggan oo u hoggaansan , sidaa darteed maahan inaan waxbadan sameeyo. Laakiin waxay xaqiiqdii iga caawisay aasaasidda booskeyga sidii hogaamiyaha xirmada indhaheeda.
Leia P Mini-ka Yar ee jira 2 sano
Teddy lab khudaar oo midabkeedu yaryahay Poodle da'da 7 sano jira
Sammy Poodle-ka Yar ee jira 11 sano
Murphy Poodle-ka Yar markuu jiro 1 sano
labrador timo gaaban iib ah
'Kani waa eeydayda Rudy. Aad buu u caqli badan yahay. Markuu ciyaarayo gadaal ayuu ka ordayaa asaga iyo isagu qayliyaa ilaa aad istaagto si uu hortaada u soo galo . Wuxuu sidoo kale u ordaa iridda oo uu garaacaa suunka intuu qaylo, oohin, iyo oohin marka aad weydiiso inuu doonayo inuu socdo ama uu bye-bye gaadhiga raaco. Wuxuu yaqaana xeelado badan sidoo kale-wuu fadhiisan karaa, tuugsan karaa (fadhiyaa una egyahay eeyga daaqsinka ah), wareejin karaa, hadli karaa, jiifsan karaa, rogrogmi karaa, istaagi karaa 2 lugood, dheeli karaa, wuxuuna ku iman karaa amar. Waxyaabaha kale ee qosolka leh ee uu sameeyo ayaa ah duubis iyo xoqid wax walba asal ahaana waalan markasta oo aan ku buufiyo cadar kasta. Isaguba aad buu u jilicsan yahay (taas oo uu ku muujiyo 'Hadal' markasta oo aad taabato sinta) . Wuxuu ku yar yahay dhinaca yar yar, isagoo 10 rodol ah iyo 12 inji dhererkiisa garabka. Isagu waa midab casaan qurxan oo qurux badan, sidoo kale. Qof walba markasta wuu istaagayaa wuxuuna weydiinayaa nooca uu yahay iyo haddii casaanku dhif yahay. Isagu waa eeyga saxda ah. '
Rudy Poodle-ka Yar markuu jiro 1 sano
Karaa Ch. Ka reebitaanka Rosebell (magaca wicitaanka: Nick), xushmadda sawirka Rosebell Kennels
Lawska yaryar ee loo yaqaan 'Poodle Mini Poodle' oo jira 9 toddobaad
Peanut the Mini Poodle puppy at 3 bilood jir ka dib markii uu timo u jaray markii ugu horeysay isagoo ku ciyaaraya alaabtiisa bakayle ee cufan
Charlie a Phantom Mini Poodle sida eey yar oo 8 toddobaad jir ah oo seexanaya dhulka
alaskan malaamute yey yaryar oo yaryar oo iib ah
Ka eeg tusaalooyin dheeri ah Poodle-ka Yar
Sawirro Poodle Guntin 1
Sawirro Poodle oo Yaryar 2
shaybaarka madow shiba inu isku dhafan
muqisho isku darka xoolaha eey collie soohdinta Australia for sale
imisa sano ayey digaagadu nool yihiin
isku-darka shaybaarka sheybaarka sheybaarka isku dhafan
waa maxay terrier ratiga decker
pitbull eyga bunni iyo cadaan ah